Umakadebona uLewandowski udlule uMessi noRonaldo | Scrolla Izindaba
Umakadebona uLewandowski udlule uMessi noRonaldo
Okokuqala ngqa emsebenzini wakhe, uRobert Lewandowski ukuthi azuze umklomelo womdlali wonyaka we-FIFA Men’s Player of the Year. Lo mgadli weBayern Munich unqobe uLionel Messi weBarcelona noCristiano Ronaldo weJuventus asebephathe iminyaka.
“Ungalinge uyeke ukuphupha,” kusho uLewandowski ekhasini lakhe le-Twitter.
“Ngibonga kakhulu ngalo mklomelo. Kuyintokozo enkulu ukuthola lokhu kusihlwa.”
Lo mcimbi ububanjwe-online cishe ngoLwesine ebusuku e-Zurich, eSwitzerland.
Lo mgadli oneminyaka engama-32 ubudala wase-Poland kube intokozo enkulu ukumbukela edlala aze afinyelele ekutholeni umklomelo.
Ushaye amagoli angama-55 emidlalweni engama-47 ngesikhathi esiza iBayern Munich ukunqoba i-UEFA Champions League, i-Bundesliga ne-German Cup.
Ukuqokwa kwakhe ngesizini edlule kubalwa nokuba umshayimagoli ovelele kwi-Champions League ngamagoli ayi-15, i-Champions League Forward of the Season ne-UEFA Men’s Player of the Year.
“Sengivele ngiqalile ngicabanga ngezindebe ezilandelayo. Lokhu kungokwami ​​nengqondo yeqembu. Ngiyethemba ukuthi sizogubha lezi ezilandelayo nabalandeli.”
Kube nempumelelo eyengeziwe kuBayern njengoba uManuel Neuer ethole umklomelo we-Best Men’s goalkeeper. Ungenelwe amagoli angama-31 kuphela emidlalweni engama-33 ye-Bundesliga.
Abanye abawinile kube:
ITottenham Hotspur: USon Heung-min uhlabane ngomklomelo we-Puskas wegoli elihle kakhulu ngokudlala kahle kwakhe ngesikhathi ebhekene neBurnley ngesizini edlule.
UJurgen Klopp weLiverpool – uwine umklomelo Womqeqeshi Wonyaka Wabesilisa.
USarina Wiegman weHolland – uwine umklomelo Womqeqeshi Wabesifazane Ohamba Phambili ku-Fifa.
USarah Bouhaddi weLyono neFrance – uwine umklomelo Kanozinti Ohamba Phambili Wabesifazane.
ULucy Bronze weNgilandi – ungumdlali Ohamba phambili Wabesifazane.
Umthombo wesithombe: @BayernMunich